Barashada Teknolojiyada Waa Xasaasi ahaan Maareeye CRM: Halkan waxaa ku yaal Qaar Kheyraad ah | Martech Zone
Maxaad ugu baahan tahay inaad barato xirfadaha tiknoolajiyada sida Maamulaha CRM? Waagii hore, si aad u wanaagsanaato Maareeyaha Xiriirka Macaamiisha waxaad ubaahantahay cilmi nafsi iyo xoogaa xirfado suuq geyn ah.
Maanta, CRM aad ayey uga badan tahay ciyaarta tiknoolajiyadda asal ahaan. Waagii hore, maamule CRM wuxuu diiradda saarey sida loo abuuro nuqul emayl ah, qof maskax badan oo hal abuur leh. Maanta, khabiir ku takhasusay CRM waa injineer ama khabiir ku takhasusay xogta oo aqoon aasaasi ah u leh sida moodellada farriintu u ekaan karaan.
Steffen Harting, CMO ee Inkitt
Maalmahan, CRM waa ciyaar gebi ahaanba ka duwan. Si loo gaaro shakhsiyeynta suuq geynta miisaanka, maamule kasta oo CRM waa inuu bartaa seddex aag. Kuwaas waxaa ka mid ah falanqaynta xogta, isdhexgalka nidaamka, iyo ogaanshaha agabka teknolojiyadda suuqgeynta (iyo muuqaalka guud ee ciyaartooyda suuqa ee xilligan ka jirta aaggan).
Tani waxay u baahan tahay xoogaa aqoon la xiriirta tikniyoolajiyadda. Heerka sifiican ee sheyga u gaar ah ee suuq geynta aad rabto inaad gaarto, tijaabooyinka horumarsan ee aad ubaahantahay inaad uur yeelatid.
Shakhsiyeynta hormarsan waxay had iyo jeer ku lug leedahay isku darka tiro badan oo xog ah oo ka yimid nidaamyada la qaybiyey. Tani waa sababta khabiirka otomaatiga suuqgeynta ay tahay inuu fahmo sida nidaamyadan ay ula hadlayaan midba midka kale iyo sida xogta loo keydinayo loona soo koobayo.
Shantii sano ee la soo dhaafay, Maamulayaasha CRM ee aan la kulannay waxay adeegsadaan xalal kala duwan oo softiweer ah (Kaabayaasha Ka Qaybgalka Macaamiisha, Kaabayaasha Macluumaadka Macaamiisha, Nidaamyada Maareynta Dhiirrigelinta, iwm.) Waxayna la shaqeeyaan hal ama in ka badan kooxaha horumarinta maalin kasta.
Waxaan ka caawinaynay kooxaha dhijitaalka ah inay aasaan xadka udhaxeeya horumariyeyaasha iyo suuqleyda mudo hada laga joogo shan sano waxa aan ogaanay ka dib markii aan dul fuulnay boqolaal macaamiil ah in suuqleyda guuleysta ama Maareeyayaasha CRM ay yihiin kuwa fahansan tikniyoolajiyadda.
Tomasz Pindel, agaasimaha guud ee Voucherify.io
Markasta oo aad waxbadan ka ogaato tikniyoolajiyadda, waxaad ku sii fiicnaan kartaa shaqadaada.
Teknolojiyada waxay ku taal bartamaha CRM.
Anthony Lim, Maamulaha CRM ee Pomelo Fashion
Haddii aad fahanto sida software-ka aad isticmaaleyso u shaqeeyo, suurtagalnimadiisa, iyo xaddidaadyadiisa, waad u isticmaali kartaa inta ugu badan ee ay suurtagal tahay. Haddii aad sidoo kale ogtahay waxoogaa horumariyaha lingo, way fududahay inaad sharraxdo oo aad kala hadasho shuruudahaaga kooxda tiknoolajiyada. Sidaas awgeed, wada xiriirka kooxda horumarinta ayaa noqda mid sifiican uhadlaya shaqadooduna sifiican ushaqeynaysa. Wadahadalka fiicani wuxuu lamidyahay gudbinta dhaqsaha ah ee nambarka ugu dambeeya iyo waqti luminta iyo waqtiga.
Haddii aad ogtahay xoogaa SQL ama Python, waxaad sidoo kale badbaadin kartaa wakhti isla markaana socodsiin kartaa weydiimaha xogta aasaasiga ah naftaada. Tani waxay noqon kartaa mid faa'iido leh, gaar ahaan haddii aad u baahan tahay wax ku-meel-gaar ah oo horumariyayaashu ay dhexda ugu jiraan orodka, oo aadan rabin inaad dhibto. Wax qabashada naftaada waxay kuu dedejin kartaa adiga habka falanqaynta xogta adiga oo u oggolow kuwa wax dhisa inay diiradda saaraan howlaha waaweyn ee ay tahay inay keenaan.
Ogaanshaha tiknoolajiyada ma ahan kala duwanaansho dambe Maareeyayaasha CRM; waxay noqotay shuruud aasaasi ah.
Waa Kuwee Xirfadaha Tikniyoolajiyadeed ee Aad U Baran Karto Maamulaha CRM?
Waa inaad taqaanaa dhowr fikradood oo muhiim ah:
Kaydinta xogta - sidee xogta loo kaydiyaa, muxuu yahay diiwaan, muxuu yahay nooc xog ahi, maxaadse ugu baahan tahay qorshe? Goorma ayey lagama maarmaan u tahay haajiridda xogta, sideese ayaa lagu qiyaasaa qiimaheeda?
Isdhexgalka Nidaamka - waa inaad ogaataa sida looga guurayo xogta hal kaydinta xogta ah loona wareejinayo shaqo kale si aad u awood u yeelatid qorsheynta iyo fulinta howlaha noocaas ah kooxdaada horumariyaha ah.
Analytics - Astaamaha aasaasiga ah iyo la socodka macaamiisha websaydhka.
Dib u noqoshada - Dib u habeynta xayeysiiska iyo sida ay u shaqeyso.
Guudmarka Qalabka MarTech:
Waa inaad si joogto ah u hubisaa khariidadda tikniyoolajiyadda suuqgeynta iyo jadwalka sii deynta. Waa inaad ogaataa waxa suurtagalnimada ah iyo haddii xajmigaagu hadda yahay midka saxda ah iyo in kale. Maaddaama tikniyoolajiyaddu ay isbeddeleyso, sidoo kale waa astaamaha (iyo qiimaha) bixiyeyaasha software-ka kala duwan.
Wixii wanaagsanaa ee sanadkii hore kufiicnaa ma noqon karaan kuwa ugufiican sanadkaan, sababtuna waxa weeye baahidaada ayaa isbadashay ama sababtoo ah waxaa jira ikhtiyaarro badan oo la heli karo ama qiimo fiican oo loo heli karo isla muuqaalka. Waa inaad ku sii jirtaa tiknoolajiyada cusub iyo adeeg bixiyeyaasha cusub ee suuqa si aad u hagaajiso xaddigaaga.
Xitaa haddii aad adigu dhistay xariggaaga, waa inaad raadisaa dhiirrigelin astaamo cusub ama dib u tixgelisaa inaad u weeciso iibiyaha dhinac saddexaad haddii qiimaha suuqa uu hoos u dhaco mana aha wax faa'iido ah in la ilaaliyo oo kor loo qaado xalka barnaamijkaaga.
Astaamaha SQL iyo / ama Python:
Kuwani waa luqadaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo falanqaynta xogta taas oo awood kuu siinaysa inaad socodsiiso su'aalo naftaada adigoon waydiisan caawiyayaasha. Barashada aasaasiga ayaa sidoo kale kaa caawin karta inaad la xiriirto kuwa ku horumaraya.
Xagee Ka Baran Kartaa Xirfadaha Tech?
Kooxdaada - tani ugu dambeyntii waa isha ugu fiican ee macluumaadka shirkaddaada. Soo-saareyaashaadu wax badan ayey ka ogyihiin qalabka aad ku haysato meesha, iyo sidoo kale wax ku saabsan beddelaadyada qaarkood. In kasta oo laga yaabo inayan wax ka ogeyn tiknoolajiyada cusub ee halkaa ka jira, waxay xaqiiqdii ogyihiin dhammaan fikradaha aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato inaad la shaqeyso. Inaad furnaato oo aad su'aalo weyddiisato waxay kugu keenayaan xawaare, gaar ahaan haddii aad hadda ka bilaabatay ka shaqeynta booskan (ama shirkaddan).
Buugaag - waxay u muuqan kartaa mid duug ah, laakiin waxaa jira dhowr buugaag wanaagsan oo halkaas yaal si loo barto aasaasiga u ah barnaamijka CRM iyo CRM. Tani waxay noqon kartaa ikhtiyaar bilaash ah haddii aad hesho maktabad (hubi maktabadaha jaamacadaha, gaar ahaan Jaamacadaha Ganacsiga ama Suuqgeynta ama waaxaha IT-ga). Haddii kale, haddii aad haysato rukhsad Kindle ah (oo hadda laga heli karo Maraykanka), waxaad awoodi kartaa inaad amaahdo buugaag qaar ka mid ah mawduuca CRM iyo sidoo kale qorshahaaga rukumashada.
Maareynta Xiriirka Macaamiisha: Fikradaha iyo Teknolojiyada
Buug-gacmeedka CRM: Tilmaamaha Ganacsiga ee Maareynta Xiriirka Macaamiisha
CRM Xawaaraha Iftiinka, Daabacaadda Afaraad: Xeeladaha Bulshada CRM 2.0, Qalabyada, iyo Farsamooyinka Ku Biirinta Macaamiishaada
Blogs - waxaa jira baloogyo badan oo loogu talagalay farsamooyinka maareynta xiriirka macaamiisha (CRM). Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay:
Blog -ka ChiefMartec
Liiska 8-da blog ee ugu sareeya CRM ee uu qoray Capterra
Majaladaha internetka - joornaalada khadka tooska ah kuyaala waa meel udhaxeysa baloogyada iyo buugaagta, iyagoo bixiya tan macluumaad ah sidoo kale ay kujiraan kuwa hormoodka ka ah teknoolojiyadda.
200 OK waa joornaal ay abuurtay Voucherify.io si ay uga caawiso CRM Maareeyayaasha inay wax bartaan xirfadaha farsamada ee lagama maarmaanka ah. Waxay ka kooban tahay maqaallo sharraxaya tikniyoolajiyadaha cusub iyo fikradaha farsamada, adeegsiga kiisaska leh agab hoose oo aan lambar lahayn oo ay si fudud ugu adeegsan karaan kuwa aan horumarintu ahayn, wareysiyo lala yeelanayo khubarada warshadaha oo la wadaagaya talooyinkooda iyo tabaha ay ku baranayaan xirfadaha lagama maarmaanka u ah doorka.
Fasalada khadka tooska ah - tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay haddii aad rabto inaad barato aasaaska koodhinta, SQL, ama fasallada Python waa inay noqdaan xulashadaada koowaad. Waxaa jira ilo badan oo bilaash ah oo la adeegsan karo.
Casharrada SQL ee suuqleyda
Isku day SQL
Skillshare - madal waxbarasho iyo wadaagid, waxay bixisaa tijaabo bilaash ah.
EDX - madal waxbarasho oo khadka tooska ah leh fasallo fara badan oo bilaash ah oo ay bixiyaan jaamacadaha adduunka ugu fiican.
Kaydinta xogta - Koorsada Python.
Website-yada dib u eegista software-ka:
Matrixka Khibrada Macaamiisha - dib u eegis ku saleysan CRM dhufto.
Kafeega, GetApp, Dadweynaha G2 - dib u eegista qalabka softiweer ee kala duwan, oo ay ku jiraan teknolojiyadda suuqgeynta.
Podcasts - haddii aad jeceshahay inaad wax ka dhageysato safarkaaga ama markaad cabayso qaxwahaaga subaxdii, podcasts waa wax weyn! Waxaad baran kartaa wax oo aad horay ugu riixday xirfaddaada adigoon u baahnayn waqti dheeri ah.
CRM Hadalka Podcast
Akhrinta dukumintiyada - wax badan ayaad ka baran kartaa akhriska dukumiintiyada aaladaha kala duwan ee aad isticmaasho ama aad u maleyneyso inaad adeegsaneyso. Muddo ka dib, waxaad sidoo kale ka baran doontaa ereyo badan oo horumariyayaal gaar u ah iyaga.
Wadada - laga bilaabo Salesforce waa kheyraad bilaash ah oo bilaash ah oo khadka tooska ah laga helo.
Midkee isha aad doorbideyso inaad ku bilowdo barashada, tan ugu muhiimsan ayaa ah inaad bilowdo. La hadal asxaabtaada, la hadal kuwa ku hormaraya, ha ka baqin dhinaca farsamada waxyaabaha.
Ku saabsan Voucherify.io
Voucherify.io waa barnaamij kumbuyuutareedka ugu horreeya ee maareynta dhiirrigelinta API-ga oo u baahan dadaalka ugu yar ee horumariyaha ah si uu u dhexgalo, wuxuu bixiyaa waxyaabo badan oo ka baxsan sanduuqa sanduuqa iyo isku-darka, waxaana loogu talagalay in lagu xoojiyo kooxaha suuq-geynta inay si dhakhso leh u bilaabaan oo ay si hufan u maareeyaan tigidhada iyo dallacsiinta kaarka hadiyadaha, bixinta, gudbinta, iyo barnaamijyada daacadnimada.
Daah-: Martech Zone wuxuu leeyahay xiriiriyeyaal xiriir la leh qodobkaan.
Tags: 200 okAnalyticscalooshaxaraashkaChiefmartecCRMcrm xawaaraha iftiinkabuugaagta crmhagayaasha crmBuug gacmeedka crmmaamule crmmasuuliyadaha maareeyaha crmcrm mvp Podcastcrm hadalka Podcasttikniyoolajiyadda crmshabakadaha crmshaxda waayo-aragnimada macaamiishamaamulka xiriirka macaamiishafalanqaynta xogtakaydinta xogtadatacampcaga crmEdxdad badangetappkhadhalgankamoodada pomeloPythondib-u-celintaxirfad wadaagsqldhaawaca steffenis dhexgalka nidaamkaaasaaska tikniyoolajiyaddaxaqiijin
Xirfadlaha suuq geynta dijitaalka ah iyo maareeyaha wax soo saarka. Xiisaynaya maareynta alaabada dhijitaalka ah iyo suuqgeynta - wax kasta oo ka yimaada isbeddellada dhismaha softiweerka, farsamooyinka maareynta mashruuca, UX isbeddellada illaa xeeladaha suuqgeynta.
Xogta Suuqgeynta: Furaha istaagga 2021 iyo wixii ka dambeeya
Codsashada AI Si Loo Dhiso Nooca Iibsiga ee Dhamaystiran iyo Bixinta Khibradaha Gaarka ah